Ama-headphone amahle kakhulu wokubuka ama-movie (Dec. 2020) - Izesekeli
Ama-headphone amahle kakhulu wokubuka ama-movie (Dec. 2020)
Kungaba umzamo osabekayo ukuqhumisa ivolumu yethelevishini yakho noma uhlelo lweshashalazi lasekhaya. Kulezi zinsuku, izindonga zizacile, futhi uma unamalungu omndeni ahlala, kungenzeka angathandi ukuphazamiseka. Imvamisa, omakhelwane bakho nabo bangakhalaza. Ngakho-ke ungayisusa kanjani le nkinga?
Kulula! Zitholele ama-headphone asebenza kahle ngokubuka ama-movie! Lokhu kwehlukile kunamahedfoni ajwayelekile njengoba lokhu kukulethela isipiliyoni sokuntywila ngomsindo ozungezile wekhwalithi yomsindo omnandi. Imvamisa, lawa ma-headphone anokucindezelwa komsindo noma ukukhanselwa komsindo.
Ingabe ufuna amahedfoni amahle kakhulu wokubuka ama-movie? Ngemuva kwalokho ukusesha kwakho kugcina lapha! Lolu hlu lusiza ukuthi unciphise imfuneko yokubheka izinto ezahlukahlukene. Sikulethela isibuyekezo esinciphisa ukujaha futhi sikulethele emininingwaneni yamaphuzu ukuze kube lula kuwe.
Sinenkomba yomthengi nama-FAQ okusula ukungabaza kwakho maqondana nalezi zinto ezisunguliwe ezinhle ukuthola eminye imininingwane. Ngakho ake siqale!
Ama-headphone amahle kakhulu wokubuka ama-movie - Ukukhetha kwesazi
1. I-COWIN E7 Noise Active Canceling Headphone
Ukuqala ngqo kwi-bat yiCowin enokukhetha okuhle kwemibala yamahedfoni. Ungakhetha uhla lwamamodeli anemibala ukulingana okuthandayo. Kunoma yimuphi umthandi webhasi ngaphandle lapho, iza nohlelo olucindezelayo lwe-bass futhi iletha ikhwalithi yomsindo esezingeni eliphakeme. Ama-headphone eza nobuchwepheshe obusebenzayo bokukhansela umsindo, okusho ukuthi azoqala ukunciphisa umsindo ngokuqhubekayo ukuqinisekisa ukuthi uyawuthokozela umsindo wakho uma ususetshenziswa.
Inamapayipi womoya wamaprotheni wokumboza kahle izindlebe zakho. Ukuthungwa kuzwakala njengesikhumba, futhi kukhona ukusakazwa komoya okufanele. Yize kunamaphedi wamaprotheni, kusengumakhalekhukhwini ongaphezulu kwendlebe ozoqala ukungakhululeki ngemuva kwamahora ama-3. Ngaphezu kwalokho, uthola imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi ukuhlangabezana nezidingo zakho zokuxhumana. Izilawuli zilula, futhi uthola ukuzithokozisa kwezwi ukukwenzela lula.
Ngokuxhuma, uthola kokubili i-Bluetooth ne-NFC. Iza nebhethri elinamandla elingu-750 mAh eletha ukusebenza okungaphazanyiswa kuze kufike emahoreni angama-30. Asikho isidingo sokuthi ukhathazeke ngokunikezwa kwamandla. Kodwa-ke, kuthatha cishe amahora amane ukushaja. Ngokwengeziwe, uthola iwaranti yezinyanga eziyi-18 enenkonzo ephawulekayo yokunakekelwa kwamakhasimende.
Impilo yebhethri yamahora angama-30 ephawulekayo
Ukusebenza okuhle kwebhesi
Ikhwalithi yomsindo engenakulinganiswa
I-Bluetooth ne-NFC inikwe amandla
Kuthatha amahora amane ukushaja
Ayikwazi ukugqoka ngaphezu kwamahora ama-3
2. Ama-headphone angenantambo we-Artiste
Lapha unama-headphone eza ne-2.4 GHz yayo ehlukile yobuchwepheshe obungenantambo. Ama-headphone eza neyunithi eyengeziwe enikezela ukuxhumana okungaphuli kathathu i-Bluetooth (kufika ku-100 ft) ukuze kube lula kuwe. Ngakho-ke, okwenza kube lula kuwe ukuhambahamba.
Lokhu kusebenza jikelele ekuxhumekeni njengoba kuza ne-AUX (3.5mm jack), i-RCA, ukuxhumana kwe-optical, nokuxhuma kwe-Bluetooth okungenantambo. Ungayisebenzisa cishe kunoma iyiphi idivayisi ngaphandle kwenkinga. Amahedfoni amahle kakhulu ngokuxhumeka kwedijithali nge-0.5% yokuhlanekezelwa ukufeza imfuno yakho ye-bass.
Lawa ma-headphone eza namamodeli angaphezulu kwezindlebe kanye ne-padding entofontofo ukunika amandla amahora wokusetshenziswa okunwetshiwe. Uxhuma ama-headphone ethekwini lokushaja, nalo eliwumzimba wokuxhuma. Ubulula benkokhiso abufaniswa, futhi buhlinzeka ngamahora angama-20 wokusebenza okungapheli ngakunye.
Kulula ukusetha ngemiyalo yezandla neyevidiyo esebenziseka kalula. Sekukonke, amahedfoni alungele izidingo zakho zasekhaya zesipiliyoni sokuzijabulisa nokuxhumeka kwe-TV. Kodwa-ke, abanakho ukuxhaswa okubalulekile kweDolby DTS ukuhlangabezana nomsindo omnandi kulowo mnyango.
I-Aux, ikhebuli ye-Optical, i-RCA, nokuxhuma kwe-Bluetooth
Ukulawulwa kwamandla we-Smart nokushaja okusheshayo (amahora amabili)
Akukho static, akukho ukuhlanekezelwa kathathu uhla lwe-Bluetooth evamile
Amahora angama-20 okusebenza okunwetshiwe
Ayinikezi okuningi ngokuxhaswa kweDolby DTS
Akufanele ukusetshenziswa kwangaphandle
3. I-Sennheiser RS120 On-Ear Indlebe ye-RF Engenantambo
USennheiser waziwa ngokwakha ama-headphone asindayo ukuze asebenze isikhathi eside. Lesi sici sithuthukiswa ngokwengeziwe ngewaranti yabo yeminyaka emi-2 kule pair of headphones. Lapha uthola ukuthembela ekusebenzeni kukaSennheiser ngesiteshi sokushaja imbeleko.
Isiteshi sokushaja sisebenza njengeyunithi ukuxhuma ne-TV, ikhompyutha namanye amadivayisi. Ungaxhuma usebenzisa ama-jacks ahlukile we-RCA ngokushelela. Okubaluleke kakhulu, lesi siteshi sinikela ngokuxhuma okuhlukile kweBluetooth okungafika ezinyaweni ezingama-300 ngaphandle kokuphazamiseka noma ukuphazamiseka kokucacelwa.
Ama-headphone aklanywe endlebeni ngomzimba osindayo. Ihambisa amahora angama-20 wokusebenza okungapheli ngenkokhiso eyodwa. Kodwa-ke, isici esigqame kunazo zonke sale yunithi ukuxhumana namanye amahedfoni. Ungaxhuma amanye ama-headphone we-RS 120 kwiyunithi eyodwa, okusho ukuthi abantu abaningi bangajabulela ama-movie ndawonye ngaphandle kokuqhuma umsindo wethelevishini yakho!
Yize kulula ukugcina nokuxhuma, kuhle kakhulu ku- ukubukela ama-movie endlini noma egumbini. Awukwazi ukuyiphatha ngocingo lwakho yonke indawo njengoba ingeyokuhamba. I-Bluetooth ayixhumi ngqo. Udinga ukuxhuma iyunithi kuma-analogs edivayisi.
Ikhwalithi yomsindo engenakulinganiswa newaranti yeminyaka emibili
Ilula futhi inethezekile ukugqoka
Ungaxhuma nama-headphone amaningi we-RS 120 (athengiswa ngokwehlukana)
Ukuxhumeka okungenantambo okunamandla (kufika ku-300 ft ububanzi)
Isiteshi sokushaja esifinyelelekayo esineshaja yokuzalwa
Iyunithi emaphakathi ayixhumi nge-Bluetooth namanye amadivayisi
Akuyona inketho evumelana nokuhamba
4. PHILIPS Digital Wireless Amahedfoni
I-Philips ikulethela inketho enkulu yohlelo lokuzijabulisa lomuntu siqu ekhaya nalawa mahedfoni. Ngobubanzi obusebenzayo obungamamitha angama-30, amahora angama-20 wempilo yebhethri, nokusekelwa kojeke okungu-3.5 mm, unendawo yokuzijabulisa ephelele. UPhilips wethula umsindo wencazelo ephezulu yesitudiyo, ohlala ungenakuqhathaniswa embonini.
Ngokuhlangenwe nakho kwe-cinematic, uthola ama-headphone abanzi. Idokhu yokushaja isitayela futhi iyabukeka ukuze ilingane nokuhlobisa kwanamuhla. Inokulungiswa kwe-hammock okuzenzakalelayo kokulingana kwekhanda nama-velor pads akulethela induduzo enkulu. Ine-othomathikhi evuliwe futhi ivaliwe umsebenzi osebenza njengoba ubeka ama-headphone akho ukuze kube lula kuwe. Okubaluleke nakakhulu, ayikho i-lag yokuxhuma.
Ama-bass aqinile nekhwalithi yomsindo opholile isignesha yePhilips enezimoto zayo ezithuthukisa ama-bass angama-30mm.Ikhanda lekhanda elilula kakhulu elisebenza kahle ngohlelo lwakho lwethelevishini. Isiteshi semikhumbi sineshaja eyakhelwe ngaphakathi, futhi ungashintsha amabhethri ngokuhamba kwesikhathi ukuze asebenze kahle.
Uma ufuna ama-headphone anethezekile ukuwagqoka amahora amaningi futhi akulethele ikhwalithi yomsindo enhle kakhulu, khona-ke lokhu kuyisinqumo esihle kuwe. Ngokuxhumeka kwe-jack, ungahlala uxhumekile ngaphandle kokuphazamiseka. Isebenza kahle ngawo wonke amamodeli we-TV.
Ikhwalithi yomsindo nebhesi ephawulekayo
Okwenziwe nge-premium-grade futhi kwakhiwe
Ukulungiswa okuzenzakalelayo nokuvula / ukuvala
Ijackphone jack uma ibhethri liphela
Ukuxhumeka okujwayelekile, akukho okukhethekile lapho
5. Ama-headphone akwa-Sony Wireless
AbakwaSony bahlala bekhethiwe abasezingeni lomhlaba njengekhanda elingcono kakhulu lokubuka ama-movie ngokutholakala kohlelo oluphelele. Iza nedokodo lapho ungahambisa khona ama-headphone akho kanye nenketho yokuxhuma enhlobonhlobo. Kusuka kwimfuneko elula ye-Bluetooth kuya ezintambo zesikole esidala se-RCA, kufaka phakathi i-AUX, uthola uhlelo oluphelele lokuxhuma
Amahora angamashumi amabili wempilo yebhethri futhi angafika ezinyaweni ezingama-150 zokuxhuma okunganqamuki kuyinto enkulu enkulu. Vele, njengoba kungumkhiqizo wakwaSony, unezinhlobo ezibanzi zokuzilibazisa komsindo. Kunamamodi wezwi nama-autotunes anezilawuli zevolumu. Uthola ukunciphisa umsindo nokukhishwa kwe-bass enamandla ngomsindo wencazelo ephezulu olingana kahle.
Kuyikhanda lokuzijabulisa le-hi-fi, ngakho-ke uma ufuna ukuzwa i-cinema ngokunethezeka kwendlu yakho, lo ngumlingani ophelele. Amahedfoni alula kakhulu, anokulungiswa okulula ukulingana nokunethezeka. Sekukonke, kuyindlela ejwayelekile kakhulu yokukhetha ngehedfoni ngokuthembeka komkhiqizo wakwaSony.
Inketho yokuxhuma okuhlukahlukene
Ikhwalithi yomsindo nebhesi enhle
Idokhu ejwayelekile kanye nesistimu yokushaja
Ukuqinisekiswa kwekhwalithi yakwaSony
Dinga ukuthi isiteshi semikhumbi sisebenze
Ama-headphone asezingeni lasekhaya ajwayelekile
6. I-Sennheiser RS ​​5000 yehedfoni engenantambo yedijithali
Uma ungathandi ama-headphone futhi ufuna okuthile okuseduze nedizayini ye-'earphones ', nakhu uSennheiser ebuya nenye into emisha emangalisayo. I-RS 5000 yaziwa ngokunikela nge-'plus' ye-TV Entertainment yakho. Okokuqala, inomzimba olula futhi osindayo we-earphone oyenza ibe ntofontofo kunamahedfoni.
Uthola ikhwalithi yomsindo engenakulinganiswa ngezinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso. Kulungile! Kunamaphrofayili amathathu ahlukene atholakalayo njengokusetha kabusha ongakhetha kukho futhi uhlangabezane nemfuneko yomsindo wakho. Akukhona lokho kuphela. Ungenza ngokwezifiso okukhipha umsindo ngokulawulwa kwevolumu ngakunye kwesokunxele nakwesokudla ukuze kube lula.
Imiyalo yayo eyenziwe yasebenza ngezwi iyisimo sobuciko futhi ikuligi ehlukile kunanoma imaphi amanye ama-headphone asohlwini. Ngokucindezela u-'+ ’uphawu kuma-earphone akho, ungaqala umyalo ngobuchwepheshe obuhlakaniphile ukuze ufunde ngokunembile imiyalo yakho yezwi ukuthola imiphumela emihle. Ngaphezu kwalokho, inomklamo obushelelezi ongawufaka lapho kuthathwa khona idokodo elikhulu eduze kwe-TV.
Ukufinyelela nokuxhuma kwayo kuhambisana namanye ama-headphone ohlwini. Ungayifaka edokheni lokushaja, futhi isici sayo sokushaja esizenzakalelayo sivimbela ukukhokhiswa okungaphezulu. Ngakho-ke, ungayigcina eduze kwedokhu yakho engaba seduze kwe-TV ukuze ifinyeleleke kalula.
Okubaluleke nakakhulu, inezinketho zokuxhuma eziphelele kusuka kwikhebula le-optic, i-RCA, aux, nokunye okuningi ukukulethela ukuzijabulisa okukhulu. Ukusebenza komsindo, ikhwalithi ye-bass, nakho konke okunye kusika emaphethelweni futhi kusesikhathini ngobuchwepheshe bamuva.
Idizayini ebumbene futhi kulula ukuyifaka ukuze kube lula kumsebenzisi
Izilawuli ezihlakaniphile, umfundi wezwi ohlakaniphile
Yenza ngezifiso ngamaphrofayili womsindo nokulawulwa komsindo ngakunye
I-Earphone elula nomzimba osindayo
Akukuhle ukugqoka nokuhambahamba
Ukungalingani okuncane ngesisindo ngenxa yomzimba omkhulu we-'plus' wezwi ngaphambili
7. Ama-headphone eSony RF400 Wireless Home Theatre
Ingabe ufuna okuthile emigqeni yamahedfoni waseshashalazini lasekhaya? Yini inhloso yalabo? Ukukulethela umuzwa ocwilisayo wama-movie anekhwalithi yomsindo omnandi, umsindo ozungezile, namabhasi. Sonke singavuma ukuthi u-Sony uyiphayona ekuletheni isipiliyoni semidlalo yaseshashalazini yasekhaya, futhi yilokho esikuthola kulomakhalekhukhwini ongenantambo!
Ngama-intshi we-1.57 inches abashayeli bemisindo, uthola ukucindezelwa komsindo okuqinile nokukhishwa komsindo kwencazelo ephezulu. Ukuxhuma okungenakuqedwa kususa noma yikuphi ukuphazamiseka noma ukuma ngenkathi kucindezela umsindo ovela ezungezile. Uthola u-150 ft wokuxhumeka okungaphazanyiswa.
Inokulawula okulula ngesilayida sevolumu, i-auto prompt, nezinye izinkinobho ezakhelwe ngaphakathi ohlangothini lwamahedfoni ukuze kube lula. Isamukeli sezwi sicacile futhi sinembile. Noma ngabe ufuna ukusakaza i-movie noma ukubukela ukuzitika ngocansi kombukiso, uthola amaphakethe endlebe entofontofo womsebenzi owenziwa isikhathi eside.
Ngokwengeziwe, inamahora we-20 wempilo yebhethri. Inesici 'sokusetha futhi ukhohlwe', esikuvumela ukuthi uxhume idokhu ku-TV. Ama-headphone azoxhuma namachweba ngokuzenzakalela, futhi amadokodo eza nokusekelwa kokushaja kwama-headphone akho. Noma kunjalo, ayinayo umsindo ozungezile noma ukusekelwa kwedijithali kwe-Dolby.
Ukukhishwa komsindo okungenakuqhathaniswa nekhwalithi yokuzijabulisa komuntu siqu
Idokhu ejwayelekile, ukuxhumana, nemodeli
Izilawuli ezilula kumahedfoni
Ayikho inketho yomsindo ozungezile
Akukho ukuxhaswa kweDolby Digital
8. I-COWIN E8 Active Noise Canceling Headphones
UCowin ubuyile ohlwini namahedfoni akhe amnandi ahambela ukuhamba ngezinjongo zokuzijabulisa. Kodwa-ke, lena inokusikeka okuncane ebhetri, inikela ngamahora angama-20, ngomzimba obaluleke kakhulu wokusingathwa okuqinile! Ukukhanselwa komsindo okuqinisekisiwe kusho ukuthi ungasebenza lawa mahedfoni nomaphi lapho uya khona.
Kanye nokukhanselwa komsindo, uthola ikhwalithi yomsindo emangalisayo. Ngokuqhathanisa, ingahlinzeka ngokukhipha okungcono okungu-25% ngomsindo omnandi kunabanye ohlwini. Kuyabonakala ngabashayeli bayo abagcwele u-100dB. Ama-cushion endlebe athambile angcono ngokushintshana ngama-degree angama-90 ukuze alingane kalula ngokuya ngosayizi wekhanda nokunyakaza kwakho. Ukumuncwa kukazibuthe ngokuqinisekile kuyasondeza isigaba.
Une-Bluetooth esebenzisana cishe nayo yonke idivayisi yokuxhuma, noma ngabe i-smartphone yakho, i-TV, noma i-laptop. Iza nombhobho owakhelwe ngaphakathi ukuhlangabezana nezidingo zakho zokuxhumana. Yini enye? Kukhona okwakhiwe ngokulawula ivolumu, ukweqa nokubuyela emuva kubuye kuhlanganiswe ukuze kube lula.
Ngokuhambisanayo, impilo yebhethri encane (amahora angama-20) inciphisa usayizi webhethri nesisindo jikelele samahedfoni. Usathola izinyanga ezingama-18 zewaranti ephawulekayo nezinsizakalo ezihlukile zokunakekelwa kwamakhasimende ukuhlangabezana nezidingo zakho. Uma ngempela kungumakhanda ophathwayo owudingayo, lokhu kungcono kakhulu ongakuthola.
Ukuxhumeka kwe-Bluetooth okuhlukahlukene
Ukuhamba-friendly futhi engasindi
Impilo yebhethri yamahora angama-20, i-earphone jack uma uphelelwa yibhethri
Ikhwalithi yomsindo ephawulekayo
Amahedfoni amahle angaphansi kwesabelomali
Impilo yebhethri encane kunamahedfoni ajwayelekile weCowin
Kusadizayinwa okusinda kancane
Umhlahlandlela Womthengi Wamahedfoni Ahamba phambili Wokubuka Ama-Movie:
Ukucatshangelwa kokuqala okufanele ukwenze uhlobo lwehedfoni oyithengayo. Kunamamodeli amabili atholakala emakethe.
Ngaphezu kwamahedfoni endlebe:
Lezi zimboza indlebe yakho ngokuphelele futhi zibonakale zilusizo ekukhanseleni umsindo oseduze. Ngakho-ke, ikhansela umsindo wangaphandle ukuhlinzeka ngokusakazwa okungaphazanyiswa komsindo endlebeni yakho. Ngaphezu kwemodeli yezindlebe, isikhathi esiningi sihle kakhulu kwezokuzijabulisa okuyimfihlo lapho ungafuni khona ukuphazamiseka.
Noma kunjalo, bavame ukungabi nomoya. Lokhu kuholela ekwakhekeni kokushisa nokujuluka okuzungeze izindlebe zakho, okungenzeka kungakhululeki. Kungase kudingeke ucabangele ubukhulu behedfoni ukuze uqiniseke ukuthi ilingana kahle nendlebe yakho. Ngaphandle kwalokho, kungadala ukungakhululeki.
Lezi zingena endlebeni yakho, ikakhulukazi ngokuthwebula okunethezeka endlebeni yakho. Nge-ventilation efanele, ungazigqoka isikhathi eside njengoba ufuna, futhi akukho ukungakhululeki maqondana nokufakwa kwendlebe yakho.
Ama-headphone asezindlebeni athambekele ekutheni abe lula ukuvakasha futhi angasindi uma ungahamba nawo kalula noma kuphi. Kodwa-ke, abahlinzeki ngokukhanselwa komsindo okusebenzayo.
Ngemuva kokunquma ukuthi yiluphi uhlobo lwamahedfoni alungele wena, sekuyisikhathi sokuthi udlulele ekucabangeni okujulile.
Amahedfoni wesimanjemanje eza nezinketho eziningi zokuxhuma. Uthola i-jack ejwayelekile noma ukukhetha kwe-USB. Iningi lamahedfoni wesimanje anokuxhumeka kwe-Bluetooth ngempilo yebhethri. Ziza nethuba likajack uma kwenzeka uphelelwa yibhethri. Kubonakala kuyisici esikahle.
Uma uthola ihedfoni enikwe amandla ngebhethri, cabanga ngokuqinile ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukushaja. Ngokufanayo, hlola ukuthi mangaki amahora wokusebenza azokunikeza. Ukuthi ungashaja kanjani ihedfoni nakho kufanele kubhekwe.
Ukuhambisana Komhlaba Wonke:
Kungakuhle uma uthola ama-headphone anokuhambisana kwendawo yonke. Cishe yonke idivayisi namuhla ingaxhuma namahedfoni. Kungaba yiselula, ilaptop, i-PC, noma isethi ye-TV. Kufanele uthole umakhalekhukhwini ohambelana kabanzi ngemisebenzi ehlukile kulesi sikhathi senguquko kwezobuchwepheshe, kufaka phakathi imidlalo.
Bheka ukunakekelwa kwamandla kagesi nokufanelekile kumahedfoni. Amadivayisi ahlukene anemiphumela ehlukile yamandla. Amanye ama-headphone angafika ne-jack universal, kepha akusho ukuthi ungayisebenzisa noma yikuphi. Ukuhamba ngokweqile kwamandla kuzolimaza i-earphone yakho kancane kancane. Kungaze kukushaye ngogesi. Ukuze uphephe, thola amahedfoni afanele.
Ukuze kube lula kuwe, izinkampani zihlanganisa izilawuli zangaphandle zamahedfoni wakho. Inketho ezenzakalelayo kuzoba yiyo elawula ivolumu. Kodwa-ke, ama-headphone amaningi anemiyalo eyengeziwe, njengokudlala nokumisa isikhashana. Abanye banenketho yokushintsha ithrekhi noma ukusheshisa, okufana nezinhlelo ezindala zomculo nama-walkman.
Ngaphezu kwalokho, imakrofoni ihlanganiswe cishe kuwo wonke amahedfoni ukuhlangabezana nezidingo zakho zokuxhumana. Kulokhu, umakhalekhukhwini ungaba nenketho yokuthola noma ukukhansela ucingo. Ukutholakala kwalezi zici akuyona ukuphela kwento ebalulekile. Ukuthi lezi zinkinobho zihlanganiswe kanjani nemodeli nakho kubalulekile.
Lezi zilawuli kufanele kube lula ukuzisebenzisa futhi zihlukaniswe ukuze zingakudidanisi. Ama-headphone amaningi eza nemiyalo yezwi futhi ayashesha manje, ikakhulukazi kumahedfoni aseshashalazini lasekhaya. Ngakho-ke, zihlole.
Design Futhi Material:
Cabanga ngokusetshenziswa kwehedfoni yakho bese ucabanga ngokwakhiwa. Kungaba ngcono uma unekhanda eliqinile elikwazi ukudonsa ukushaqeka. Amahedfoni angenye yamadivayisi athambekele ekwehleni.
Ngaphezu kwalokho, ukulingana okufanele kungaba yindlela enhle ongayifuna. Ama-headphone amaningi eza nomzimba oguquguqukayo ukufinyelela ekhanda lakho nokuqinisa ikhanda lakho ngokuqinile. Ukubambelela, uhlobo lwezinto zokubambelela endlebeni, kanye nekhwalithi yalokho okubalulekile kuzodlala indima ebalulekile empilweni ende yamahedfoni akho.
Ukukhanselwa komsindo noma ukucindezelwa:
Qiniseka ukuthi ukhumbula umehluko obucayi phakathi kwalezi zici ezimbili. Akuvamile ukuba nama-headphone athembisa ukukhanselwa komsindo. Iningi labo liza nokuhlanganiswa kokucindezela umsindo. Kodwa-ke, ngaphandle kokuba ezindlebeni zezindlebe nezindlebe, lokhu kungaba ukucatshangelwa okunengqondo.
Isifakwakhanda sokukhansela umsindo ngokuvamile sinezinto ezengeziwe zokuphikisa umsindo wangaphandle futhi sikhansele umsindo ukuze uthokozele umsindo. Kodwa-ke, isifakwakhanda sokucindezela sizowudambisa umsindo ngomqamelo nomzimba ukuze unikeze ukuphazamiseka okuncane.
Amanye ama-headphone awanakho ukuhambisana neDolby Digital. Yize kungeyona into ebaluleke kakhulu, ukwesekwa kukaDolby kungahle kuhlanganiswe nokwenza ngokwezifiso ikhwalithi yomsindo nokukhiphayo. Abantu abaningi bakhetha ama-bass, kepha amanye ama-headphone awanabashayeli be-bass. Ungadidanisi umsindo ozungezile weDolby Digital; zombili zihlukile futhi zidinga ukucatshangelwa okuhlukile.
Iningi lama-headphone asohlwini anohlelo lwe-dock. Inika amandla ama-headphone akho ukuxhumana ne-TV namanye amayunithi anamandla amakhulu. Qinisekisa ukuthi iyunithi lakho lokumisa amadokodo liqinile, njengoba abakhiqizi abaningi bengagxili ebuqothweni bedivayisi. Kufanele ibe nenketho ekhokhiswayo nokusekelwa kwe-analog okuguquguqukayo kokuxhuma okuphelele.
Uma unamalungu amaningi, lapho-ke idokodo elisekela ama-headphone amaningi kungaba ngcono ukujabulela ama-movie ndawonye ngaphandle kokuncika kokukhiphayo komsindo we-TV yakho.
Ezinye Izici Ongazicabangela:
Nalu uhlu lwezinye izinto ongazicabangela ngenkathi ukhetha ihedfoni:
Ukusekelwa kwe-Equalizer ukunika amandla ukwenza ngokwezifiso ikhwalithi yomsindo ngokuya ngemfuneko yakho.
Ikhwalithi yomsindo nokukhipha kufanele kubhekwe. Ukusekelwa kwe-HD Sound kubalulekile ezweni lanamuhla.
Uma uthanda ama-bass, khona-ke ama-headphone ayatholakala nge-bass support.
Ukulungiswa kwevolumu nokusekelwa kungaba lula
Izimpawu ezishaqisayo, ubufakazi bamanzi, nezimpawu zesimo sezulu zingakhuphula impilo yayo
Iwaranti noma isiqinisekiso singasiza, ikakhulukazi kumahedfoni aphezulu.
Q: Ingabe Ukukhanselwa Kwemisindo Esebenzayo Kuhluke Kanjani Kunokusulwa Komsindo Ojwayelekile?
KUYA:Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo imvamisa kunezinto ezengeziwe kumahedfoni. Uma uxhuma futhi udlala ama-headphone akho, lezi zingxenye ziyasebenza. Abanye bane-percentile yokuhlanekezela abakwenzayo. Abanye bane-counter vibration yokukhansela umsindo wangaphandle. Okwamanje, ukukhanselwa komsindo okujwayelekile kuncike kusihlalo sakho se-headphones kanye nezinto zokunciphisa noma ukukhansela umsindo.
Q: Ingabe Kulungile Ukugqoka Amahedfoni Akho Emphakathini?
KUYA:Kunamahedfoni alungele ukuhamba ongakwazi ukuwagqoka noma ukuwaphatha phambi kwabantu. Kodwa-ke, ama-headphone ama-movie noma amathiyetha asekhaya akhiwe ngokuhlukile. Zikulethela ukusebenza okungcono kunethezekile lendlu yakho. U-Ergo, bangahle bakuphazamise kalula emphakathini okungaholela ekuthini kube nezinkinga. Kungcono ukuthi ungafaki ama-headphone 'we-homethreate' emphakathini.
Q: Ungaxhuma ama-headphone ngama-Dock ngqo ku-Jack?
KUYA:Ama-headphone eza nesiteshi sokumisa imishini ngokuvamile awanayo i-earphone jack noma inketho yokuhlanganiswa kokuxhuma ngqo. Ngenye indlela, inketho yejack izotholakala kumadokhumenti ukuze ujoyine. Lokho kuzokuvumela ukuthi uxhume i-dock yakho kunoma iyiphi idivayisi. Kodwa-ke, itheku namahedfoni axhumeka ngokuyinhloko ngokuxhumeka okukhawulelwe kwe-Bluetooth.
Q: Ungayisebenzisa I-Bluetooth Ukuxhuma Ama-headphone Ngqo Ngaphandle Kwe-Dock?
KUYA:Kuya ngemodeli nezici zayo. Amanye ama-headphone anenketho yokuxhuma ngqo kwamanye amadivayisi ngaphandle kokudinga amachweba. Ezimweni eziningi, uzodinga idokodo ukuze uvikele amahedfoni aseshashalazini lasekhaya. Ivimbela noma yikuphi ukungasebenzi kahle futhi inikeze ukuxhumana okungcono.
Akuwona wonke amadivayisi anokukhipha umsindo okuphawulekayo. Ezinye zazo zizodinga indawo yaseshashalazini yasekhaya. Kodwa-ke, ezweni lanamuhla, izinkundla zemidlalo yasesekhaya seziyinkinga. Uma ubacabangela omakhelwane bakho noma amalungu omndeni, kufanele ucabangele lawa mahedfoni.
Siqinisekisa ukuhlanganisa okuhlukahlukeneamahedfoni amahle kakhulu wokubuka ama-moviekusuka kuzinketho ezilungele isabelomali kuya kuzindikimba zombala eziguquguqukayo, nemikhiqizo emikhulu ukukusiza uthole ama-headphone amahle kakhulu wokubuka ama-movie! Ungavumeli noma yini ikumise, ikakhulukazi hhayi ukuphazamiseka noma ukuxhumeka, ngalawa mahedfoni aqinile.
I-Oculus Quest 2 Metaverse: Isango Eliya Emhlabeni Ongokoqobo!
I-Viewing Booth Iwukuhlola Ilukuluku Lomuntu: Kumele Uyibukele